Guddoomiyaha Golaha Shacabka JFS oo Xafiisyo cusub ku wareejiyay Guddiyada Joogtada ah ee Golaha – Walaal24 Newss
Guddoomiyaha Golaha Shacabka JFS oo Xafiisyo cusub ku wareejiyay Guddiyada Joogtada ah ee Golaha
July 30, 2018	Off	By walaal24
Guddoomiyaha Golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa maanta qaar ka mid ah Guddiyada Golaha shacabka ku wareejiyay xafiisyo cusub oo ay ku shaqeeyaan.
Guddiyada xafiisyada lagu wareejiyay waxaa ka mid ah.
Guddiga ganacsiga iyo dhaqaalaha ee golaha shacabka.
Guddiga difaaca ee golaha shacabka.
Guddiga arrimaha bulshada ee golaha shacabka.
Guddiga xeer hoosaadka ee golaha shacabka.
Guddiga beeraha ee golaha shacabka.
Guddoomiyeyaasha guddiyada lagu wareejiyay xafiisyada cusub ayaa ka mahad celiyay kuna ammaanay Guddoomiyaha Golaha Shacaka Mudane Maxamed Mursal Sheikh C/raxmaan sida dhaqsiyaha leh uu kaga jawaabay codsigooda.
“ Runtii xafiisyadaan cusub ee naloo dhisay wax weyn ayay shaqadeena ku soo kordhinayaan waana ugu mahad celineynaa Guddoomiyaha tallaabada wanaagsan ee uu qaaday” ayuu yiri Xildhibaan Xuseen Carab Ciise.
Guddoomiyaha Golaha shacabka ee BJFS Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa guddiyada golaha kula dardaarmay iney shaqooyinkooda sii laba jibaaraan, maadaama loo dhisay xafiisyadii ay u baahnaayeen.
“ Waxan ku guuleysanay inan dhammaan Guddiyada Golaha Shacabka aan u dhisno xafiisyo ay ku shaqeeyaan, hadda ka dib waxa ay ka maarmi doonaan shirarkii ay ku qabsan jireen hoteelada”. Ayuu yiri Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Guddoomiyaha ayaa xusay inuu ku faraxsan yahay inuu ka dhabbeeyo balan qaadkii ahaa in guddi walbo uu helo xafiis u gaar ah.
“ Maanta aad bay ii farxad gelineysaa inan arko Guddi walbo oo leh xafiis u gaar ah, cid walbo oo gacan ka geysatay wa u mahad celinayaan” ayuu mar kale yiri guddoomiyaha.
Guddoomiye Mursal waxaa wareejinta xafiisyada waxaa ku wehlinaayay Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha shacabka Mudane C/weli Sheekh Ibraahim (Muudeey), Habdhowra golaha shacabka Mudane Xildhibaan Maxamed C/llaahi Xasan (Nuux) iyo Xoghayaha Guud ee Golaha Shacabka Mudane C/kariin Xaaji Cabdi (Buux).
Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo booqday goobo mashariic ay ka fulineysay Dowladda Eriteriya
Dowlada Soomaaliya oo iska diiday codsi ugu yimid Midowga Afrika ku saabsan kiiska Bada
Guddoomiyaha Golasha Shacabka Soomaaliya oo gaaray magaalada Xuddur ee Gobolka Bakool
Ra’iisul wasaare Khayre oo booqday Dadkii ay saameyeen fatahaadii ka dhacday Bardaale
Dhageyso: Puntland oo ku dhawaaqday in aysan ogolaan doonin cid dambe oo fiiso la’aan ku soo gasha…
Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo Hadal ka jeediyay Golaha Amaanka cadeeyayna mawqifkiisa muranka Bada iyo…..
Daawo: Furitaanka kalfadhiga 3 aad ee labada Aqal “Soomaaliya waxey diyaar u tahay maal-gashi iyo ganacsi, mana ogolin in lagu xad gudbo midnimada Umadda Soomaaliyeed”